မှားယွင်းစွာ ဂျီနိုဆိုက်စွပ်စွဲခံရခြင်းမှ မြန်မာလွတ်မြောက်ရမည် – H2Oupdatenews
မှားယွင်းစွာ ဂျီနိုဆိုက်စွပ်စွဲခံရခြင်းမှ မြန်မာလွတ်မြောက်ရမည်
မှားယွင်းစွာ ဂျီနိုဆိုက်စွပ်စွဲခံရခြင်းမှ မြန်မာလွတ်မြောက်ရမည်၊ ပြည်ပက အမျိုးမျိုး ပြောဆိုနေကြသူတွေဟာ ပြည်တွင်းနေ မြန်မာတွေထက် ပိုပြီး သိနိုင်ပါ့မလား၊
Myanmar must be clear from false Genocide! How could those foreign commenters know better than the locals?
အစဉ်လေးစားစွာဖြင့်… See More — with မြတ်တော်ဝင်, Nilar Lin and Thethtar Thet.
Previous Previous post: ဂျီနိုဆိုက် စွပ်စွဲချက်မှာ မပြည့်မစုံနှင့် လှည့်စားဖော်ပြသည့် သတင်းများသာဖြစ်ဟု ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးပြယုဂ် မြန်မာခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ချေပပြောဆိုကြောင်းနိုင်ငံတကာမီဒီယာတို့ ဖော်ပြ
Next Next post: PUBG Game စိတ်ဝင်စားလွန်ပြီး ရေနှင့် အဆိပ်ပုလင်းမှားယွင်းသောက်မိ၍ အိန္ဒိယဂိမ်းဝါသနာအိုးလူငယ် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံး။ ၆-နာရီကြာတောက်လျှောက်ကစားပြီး လူသေဆုံးမှု့ဖြစ်ပေါ်